China China mugadziri wemakemikari ekuvaka akakwira flexible RDP VE3213 Manufacturer uye Supplier |Longou
China inogadzira makemikari ekuvaka akakwira anochinjika RDP VE3213
ADHES® VE3213Re-dispersible Polymer Powderndeyepolymer polima yakagadzirwa ne ethylene-vinyl acetate copolymer.Ichi chigadzirwa chine yakanaka kuchinjika,kukanganisa kupikisa, zvinobudirira kuvandudza kunamatira pakati pedhaka nerutsigiro rwakajairwa.
Sezvo aflexible polymer, ADHES® VE3213redispersible polymer podainonyanya kukodzera zvinhu zvekuvaka izvo zviri pasi pekuwedzera kwekupisa kana mechanical stress.Inopa zvakanakisakukanganisa kupikisauye inobatsira kudzikisa kuumbwa kwekutsemuka mune dzakatetepa-layer application.Rdispersible polymer hupfuVE3213 inopa yakanakisa kunamatira kunyangwe kune yakaoma substrates.
➢ Insulation (EPS, XPS),anti-crack mortar
➢ Grout yeGypsum
➢ Madhaka anodzivirira mvura, insulation system
➢Kunze kwemadziro flexible putty, inochinjika nhete yedhaka
➢ Pfeka-inodzivirira pasi, kugadzirisa kongiri
Kuchengeta uye Package:
Chengetedza purogiramu yepakutanga munzvimbo yakaoma uye inotonhorera.Mushure mekunge pasuru yavhurwa kuti igadzirwe, inofanirwa kuvharwa zvakare zvakasimba
Tora iyo nekukurumidza sezvinobvira kudzivirira unyoro;
Package: 25kg / bhegi, multilayer bepa epurasitiki composite bhegi, sikweya pasi vharafu chiteshi, yemukati polyethylene firimu bhegi.
Ndapota shandisai mukati memwedzi mitanhatu, uye shandisai nokukurumidza sezvinobvira pasi pekushisa kwepamusoro uye humidity mamiriro, kuitira kuti urege kuwedzera mukana wekubika.
Zvakapfuura: Polycarboxylate Superplasticizer Powder PCE Mvura Inoderedza mumiririri wegrouting
Zvinotevera: Flexible Re-dispersible Emulsion Powder VE3211 ye tile grouting
Yepamusoro yakakurumbira ethylene-vinyl acetate co-polymer f...
VAE Re-dispersible polymer upfu AP1080 nokuda dr...
Rudzi rutsva rweRe-dispersible Polymer Powder VE30...